« Rallye International de Madagascar » : hatao ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny “super spéciale” | NewsMada
« Rallye International de Madagascar » : hatao ao amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny “super spéciale”
Hiavaka ny andiany faha-38 amin’ny “Rallye International de Madagascar”. Hiakatra ny kianjaben’i Mahamasina ny mpifaninana ka hanatontosa ny “super spéciale”, eo amin’ny “piste”- n’izany fotodrafitrasa izany. Mpifaninana 29 no hiady ny lohany, amin’ity.
Hotanterahina, ny 10-12 novambra ho avy izao, ny “Rallye International de Madagascar“, andiany faha-38. Hiavaka fa tsy ho toy ny mahazatra ny ho fizotry ny fifaninanana, amin’ity. Hisy ny “super spéciale”, hatao eo ambony “piste” fihazakazahana ao Mahamasina, mandritra ireo andro telo ka hotontosaina amin’ny alina, ny andron’ny asabotsy.
Hihodina intelo ireo mpifaninanana ka fiara roa no indray hiainga amin’ny toerana roa samy hafa. Nambaran’ny filohan’ny federasiona fa mba hampanakaikezina ny mpijery sy ny vahoaka ary ny mpankafy ny “rallye” fa tsy any ambanivohitra hatrany toy izay efa fanao. Na izany aza, hisy ihany ireo dingana manokana “ES“, tsy maintsy vitaina ivelan’ny kianjaben’i Mahamasina.
Mahatratra 17 ny isan’ny “ES” amin’ity “Rallye International de Madagascar” ity, izay hirefy 178, 5 km. Hisy 29 kosa ireo mpanamory handray ny fiaingana ka avy any Frantsa ny iray, i Pierre Mc Donald, hitondra ny fiara P.206. Hanana ny lanjany ity “rallye” ity satria mpanamory enina no mbola afaka hiady ny ho tompondakan’i Madagasikara : i Ndrianja, i Boana, i Haja Danielson, i Louvel, i Tahiana ary i Yves. Hanana lanjan’isa “coefficient 2” rahateo ity “rallye international de Madaagscar” ity.
“Efa nohatsaraina ny lalana handehanan’ny mpifaninana rehetra, amin’ity, ka inoana fa hiady tsara ny fihaonana”, hoy Rakotofiringa Jimmy, filohan’ny federasion’ny sport automobile malagasy.
Ho lanonambe tokoa ity fifaninanana ity, satria hisy ny “show case“, hatao amin’ny andro faran’ny “rallye” ka nasaina manokana hanao fampisehoana, amin’ny karting, i Laza sy i Louvel. “Mba hanehoana ny fahaiza-manaon’ny mpanamory malagasy sy ny lanjan’ny “rallye” malagasy amin’ireo olona any ivelany ny antony nanohanan’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ity “Rallye international de Madagascar” ity, hoy Andriamisa Patrick, talen’ny fotodrafitrasa Mahamasina. Marihina fa mpanohana ity fifaninanana ity ny DHL sy ny Orange, ny Total ary ny Ostie miampy ny Pirelli.
Fepetra noraisina, manoloana ny mety ho fisehon’ny aretina pesta, hisy ny fakana ny hafanan’ireo mpifaninana sy ny mpijery, eo Mahamasina.